နေခြည့်အဖေလိုယောက်ျားမျိုး လိုချင်တယ်……. နေခြည်ဦး – 8Days Journal
နေခြည့်အဖေလိုယောက်ျားမျိုး လိုချင်တယ်……. နေခြည်ဦး
Published: February 26, 20204:39 AM Updated: 4:41 AM
အဖေနဲ့တူတဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို နေခြည်လိုချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ နေခြည့်အဖေက မိသားစုနဲ့ သားသမီးကို အ ရမ်းချစ်တာ။ နေခြည့် ဘဝမှာ နေခြည့်ကို ပြောဖူးတဲ့ ယောက်ျား နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ပထမယောက်ျား က ဘဝမှာ သမီးအတွက်ဆို အသက်ပါ ပေးမှာတဲ့။ အဲဒီလိုယောက်ျားမျိုးက နှစ် ယောက်တွေ့ဖူးတယ်။
အဲဒီထဲမှာ နေ ခြည့်အဖေက ပထမဆုံး ပြောတဲ့အ တွက် ဘယ်လောက်ပဲချစ်ပါတယ်ဆို တဲ့ ဘယ်ရည်စားမှ မပြောဖူးဘဲ နေခြည့် အဖေက ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ အဖေ့ လိုယောက်ျားမျိုး နေခြည်လိုချင်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းကို သတင်းထောက် ရွေ ရင်က တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Next Next post: အကောင်းမြင်ပေးတတ်တာက ကိုယ့်အတွက် အေးချမ်းတယ်… ပန်ကိတ်ဒါဒါ
“အနုပညာတကယ်ကောင်းတဲ့သူတွေကို စိတ်ရင်းနဲ့ အမြင့်တင်ပေးချင်တယ်”ယုန်လေး
Published: May 16, 20205:14 AM Updated: 5:15 AM